Shell Sofa - Imewe Mmewe
Sofa Shell sofa pụtara dị ka ihe jikọtara shells n'oké osimiri na usoro ejiji na-e imomi teknụzụ exoskeleton na mbipụta 3d. Ebumnuche ahụ bụ ịmepụta sofa na nsonaazụ nke echiche ele anya. Ọ ga-abụ ọkụ na airy arịa ụlọ ga-eji ma n'ụlọ ma n'èzí. Iji mezuo nsonaazụ nke lightness, a na-eji weebụ eriri nkeịlọn. Ya mere, a na-edozi ekwesi ike nke ozu site na iji akwa na ịdị nro nke akara silhouette. Enwere ike iji ntọala siri ike n'okpuru ngalaba nke oche ahụ dị ka tebụl dị n'akụkụ na oche dị ala dị nro na akwa ga-emechaa ihe mejupụtara ahụ.
Aha oru ngo : Shell, Aha ndị na-emepụta ya : Natalia Komarova, Aha onye ahịa : Alter Ego Studio.